အမြန်လမ်းမှာယာဉ်မောင်းအား ကားငှားလာသူများမှ ဓါးနဲ့ထိုးပြီးကားယူပြေး – ရှအေလငျး
ဖေဖော်ဝါရီလ(၆)ရက်နေ့ ညနေ(၀၅၀၀)နာရီချိန်ခန့််က နေပြည်တော်တွင် ကျောက်ပန်းချီကားများ တင်ရန် တောင်ဥက္ကလာပ နန္ဒဝန်ဈေး အနီးရှိ အငှားယာဉ် ဂိတ်မှအငှါးလိုက်ပါလာသည့် ယာဉ်မောင်း ကိုဝင်စိုး. (၃၄)နှစ်. (၆)ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကလာပ. ရန်ကုန်မြို့ နေ သူမောင်းနှင်သော 8G/9727. Light truck အဖြူရောင်ယာဉ်သည်.
ငှားရမ်းသူ. ကျား(၂)ဦး(စိစစ်စဲ) လိုက်ပါလျက်. ည(၁၀၃၀) နာရီချိန်တွင် ဖြူးတွင်ထမင်းစားပြီး. ဆက်လက် ထွက်ခွာရာ. မိုင်တိုင် ၁၇၉/၁နှင့် ၁၇၉/၂. အကြား လမ်းဘေး မြေသားလမ်းတွင် ရပ်တန့်ရပ်နား ရ်ျ. ယာဉ်ပေါ် ပါသူ များနှင့်အတူ ဘီယာ အတူတူ ထိုင်သောက်ရင်း. မှ.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၇) ရက် နံနက်(၀၂၀၀) နာရီခန့်လောက်တွင် ယာဉ်မောင်းအား. ကားငှား လာသူ များမှ. ဒါးနှင့် ထိုးရ်ျ ယာဉ်ကိုမောင်းနှင်သွားသည်ကို တွေ့ရှိကြောင်း
ခရီးသွားယာဉ်(၁)စီးမှ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ သို့သတင်းပေးပို့ သဖြင့်. အခင်းဖြစ်ရာ နေရာသို့ . အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့သာဂရ စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ.
ယာဉ်မောင်း ကိုဝင်းဆွေ အား ဝမ်းဗိုက် ဒဏ်ရာ(စိုးရိမ်ရ) တွေ့ ရှိသဖြင့်. လူနာ ကို ဆေးရုံသို့နံနက်(၀၂၃၀) နာရီတွင် ပို့ ဆောင် ထားရှိပြီး တရားခံ နှင့်ယာဉ်အား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်.
ကနဦး ဒဏ်ရာရရှိသူထွက်ချက်အရ ခေတ္တရပ်နား စဉ်စကားများရာမှ. ဒါးဖြင့်ထိုးကာ လက်လွန်၍ ကားယူကာ ထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး
ဖဖေျောဝါရီလ(၆)ရကျနေ့ ညနေ(၀၅၀၀)နာရီခြိနျခနျ့က နပွေညျတျောတှငျ ကြောကျပနျးခြီကားမြား တငျရနျ တောငျဥက်ကလာပ နန်ဒဝနျဈေး အနီးရှိ အငှားယာဉျ ဂိတျမှအငှါးလိုကျပါလာသညျ့ ယာဉျမောငျး ကိုဝငျစိုး. (၃၄)နှဈ. (၆)ရပျကှကျ တောငျဥက်ကလာပ. ရနျကုနျမွို့နေ သူမောငျးနှငျသော 8G/9727. Light truck အဖွူရောငျယာဉျသညျ.
ငှားရမျးသူ. ကြား(၂)ဦး(စိစဈစဲ) လိုကျပါလကျြ. ည(၁၀၃၀) နာရီခြိနျတှငျ ဖွူးတှငျထမငျးစားပွီး. ဆကျလကျ ထှကျခှာရာ. မိုငျတိုငျ ၁၇၉/၁နှငျ့ ၁၇၉/၂. အကွား လမျးဘေး မွသေားလမျးတှငျ ရပျတနျ့ရပျနား ရျြ. ယာဉျပျေါ ပါသူ မြားနှငျ့အတူ ဘီယာ အတူတူ ထိုငျသောကျရငျး. မှ.
ဖဖေျေါဝါရီလ(၇) ရကျ နံနကျ(၀၂၀၀) နာရီခနျ့လောကျတှငျ ယာဉျမောငျးအား. ကားငှား လာသူ မြားမှ. ဒါးနှငျ့ ထိုးရျြ ယာဉျကိုမောငျးနှငျသှားသညျကို တှရှေိ့ကွောငျး
ခရီးသှားယာဉျ(၁)စီးမှ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့သို့ သတငျးပေးပို့သဖွငျ့. အခငျးဖွဈရာ နရောသို့. အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့ သာဂရ စခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား သှားရောကျစဈဆေးရာ.
ယာဉျမောငျး ကိုဝငျးဆှေ အား ဝမျးဗိုကျ ဒဏျရာ(စိုးရိမျရ) တှရှေိ့သဖွငျ့. လူနာ ကို ဆေးရုံသို့ နံနကျ(၀၂၃၀) နာရီတှငျ ပို့ဆောငျ ထားရှိပွီး တရားခံ နှငျ့ယာဉျအား ဖမျးဆီးရမိရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ.
ကနဦး ဒဏျရာရရှိသူထှကျခကျြအရ ခတ်ေတရပျနား စဉျစကားမြားရာမှ. ဒါးဖွငျ့ထိုးကာ လကျလှနျ၍ ကားယူကာ ထှကျပွေးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး သိရှိရပါသညျ။အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး
ဒီလ အတွက် ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးကို မီးသတ်သတ်သမားလေး တစ်ဦးမှ ကံထူး :O
လက်နှစ်ဖက်စလုံးမရှိပေမယ့် …အသက် ၉၁နှစ်အရွယ်အမေကို …လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ သား
“မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး …ယင်းမာပင်​တိုက်​နယ်​တွင် ကလေးသုံးမွှာပူးအား.. အောင်​မြင်​စွာမွေးဖွားနိုင်​”
ချမ်းမြေ့မောင်ချို အမေနဲ့ ပတ်သတ်သမျှ အကြောင်းတွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေ...